China Black tongolo gasy fanamboarana sy orinasa | Nongchuanggang
Tongolo lay mainty, izay vita amin'ny tongolo gasy vaovao ary namboarina tao anaty boaty misy fermentation miaraka amin'ny hoditra mandritra ny 90 ~ 120 andro, dia misy vokatra tsara mpanohitra. Ny tongolo lay mainty dia karazan-tsakafo mahazatra ny tsirairay. Ny fihinanana tongolo lay mainty dia mety mahasoa amin'ny fahasalamana, indrindra ny tongolo lay mainty dia azo ampiasaina hanohanana ny fahasalaman'ny lalan-dra. Ny tongolo gasy mainty dia sakafo mahasalama be tsy misy voka-dratsy. Noho izany, afaka matoky ny olona rehefa mihinana tongolo gasy mainty, ary tsy misy fady amin'ny collocations.
Ny tongolo lay mainty dia malefaka toy ny jelly ao am-bava ary tsy manana ny fofon'ny tongolo lay manta aorian'ny sakafo. Izy io koa dia tsy miteraka fahasosorana ratsy amin'ny vavony. Tsiro malefaka, mamy sy marikivy tsy misy fanentanana. Mba hitazomana hamandoana be dia be ao amin'ny tongolo lay, dia foana ny fizotrany, izay mitovy amin'ny fisehoan'ny voankazo maina.
Ao amin'ny atin'ny tongolo mainty tongolo Allicin dia manan-karena be, afaka misafidy ny hihinana tongolo gasy mainty ianao dia tsara ho an'ny fahasalamana, indrindra fa ny fihinana tongolo lay mainty hanampiana antsika hamono otrikaretina grika am-polony sy vatana mikraoba mikraoba isan-karazany, tena ilaina amin'ny fisorohana ny aretina, ary miaraka amin'izay dia misafidy ny hihinana tongolo lay mainty misy fiantraikany miady amin'ny bakteria fanoherana ny bakteria, noho izany ny tongolo lay mainty dia tsy azonao hadino ny safidy tsara.
Ny tongolo lay mainty dia mety mihinana tokoa. Afaka mandray tongolo lay mainty mivantana fotsiny isika. Ho an'ireo olona manana fahatezerana mafy dia ampy ny mihinana tongolo lay mainty isan'andro. Ho an'ny olon-tsotra salama dia afaka mihinana tongolo lay mainty kely kokoa izy ireo, saingy tsy tokony hihinana be loatra. Mahasalama ny mihinana tongolo gasy mainty amin'ny antonony.
Ny tongolo lay mainty dia tsy maintsy mifehy ny habetsany, rehefa hihinana ho an'ny olon-dehibe salama, amin'ny ankapobeny isan'andro mba hihinana tongolo gasy mainty iray na roa, raha tianao ny hifehezana ny olan'ny fitohanana, ka tokony hihinana tongolo lay mainty telo na efatra isan'andro isika, ary te hanatsara ny tsimatimanota amin'ny tongolo lay mainty, dia tokony hihinana tongolo lay mainty koa.
Karazana: Tongolo lay
Karazana fanodinana: mifoka
Fomba fanamainana: AD
Karazan-pambolena: trano fambolena, mari-pana ambony
Anaran'ny marika: tongolo lay mainty
Function: manatsara ny fitohanana
Tsiro: Mamy sy marikivy
Fomba fitehirizana: Temperature ambany
Fanamainana dingana: taorian 'i jk
Fiankinan-doha: tsy misy
Tsiro: Sour sy Sweet
Teo aloha: Ginger organika
Manaraka: Legioma mivaingana